Rasaasaalee fi Lakkaawwiin keewwatootaa Writer, Impress fi Draw dhaan qofa deeggarama.
Keewwatoota ammeef ykn keewwatoota filatamaniif ufmaan lakkaawwii ykn tarreessii dhaamsuu ni dandeessa. Sajoo Lakkaawii Dhaamsi kan kabala rasaasaalee fi Lakkaawwii keessaa cuqaasi.
Qarreen kan argamtu tarree lakkaawame ykn rasaasame keessatti yoo ta'e, lakkoofsota ykn rasaasaalee ofumanii keewwata ammee ykn keewwatoota filatamaniif sajoo rasaasaalee Banuu/Dhaamsuu kan kabala Dhanga'ina Barruu keessaa cuqaasuunn dhaamsuu ni dandeessa.
Gabatee cuqoo fayyadamuun lakkaawwii dhaamsuuf:
Qarree jalqaba keewwata lakkaawame irra godhiiti furtuu Backspace dhiibi.
Lakkaawiin keewwataa ni bada, tartiiba lakkaawwii irraas ni haqama. Lakkaawiin keewwata itti aanee jiru irraa eegalee itti fufa.
Keewwata duwwaa lakkaawame keessatti furtuu Enter yoo dhiibde, lakkaawwiin ni dhaabata.
Dhangii - Rasaasaalee fi Lakkaawwii
Tarreewwan lakkaawwame makuu
Title is: Keewwatoota Kophaaf Rasaasaalee fi Lakkaawwii dhaamsuu